Iphupha malunga noviwo loBhaliso Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Umntu kuthiwa "uvuthiwe" xa emdala okanye ekhule ngokupheleleyo. Kubantu abaninzi bakudala, oko kubizwa ngokuba kuvavanyo lokuvuthwa kwathathwa njengophawu lokuba mdala. Ukuba oku kube yimpumelelo, ulutsha lwamkelwa kwisizwe njengabantu abadala ngokupheleleyo kwaye ubukhulu becala bafumana uphawu lokukhula.
Namhlanje, igama elithi "iimviwo zematriki" likwathetha ukuthatha i-Abitur. Kodwa nokuba lisiko lesizwe okanye i-Abitur, zonke iimviwo zokuphela kwesikolo ziyafana ukubonakaliswa kobuchule kunye neetalente. Umntu ohlolwayo kufuneka azingqine kwaye abonise ukuba "uvuthiwe" ebomini.
1 Uphawu lwephupha «uvavanyo lokugqibela» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uvavanyo lokugqibela» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uvavanyo lokugqibela» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uvavanyo lokugqibela» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu lwephupha "ukuphela kwezifundo zovavanyo" lunokufuzisela iphupha, into onokuyiphumeza kunye nokuba ubuntu bakho bunokuba njani xa sele buqulunqwe ngokupheleleyo. Kwakhona, olu phawu luphupha luyivumela ukuba ibe yeyakho Ukuhlaziya kwakhona kubonisiwe kwi el mundo yomlindo.
Olunye utoliko ekutolikeni ngokubanzi kwamaphupha lubona kwisimboli yamaphupha "kuvavanyo lokugqibela" kubonisa ukuba angabonakala njani umfanekiso wakhe onawo nazo zonke iziphiwo anazo ngokugqibeleleyo.
Ukuba iphupha kufuneka liphumelele uviwo lokugqibela esikolweni ephupheni lakhe, ukutolikwa ngokubanzi kwephupha kuthetha kuye ukuba kungekudala kuya kufuneka enze izigqibo phantse zigqithile. Ukuba ukungahambi kakuhle okanye ukungahambi kakuhle kuhamba kunye noviwo lobhaliso ephupheni, umphuphi kufuneka aqonde ukuba ngoku lixesha elifanelekileyo Ubomi buyatshintsha ifikile. Ke ngoko, kuya kufuneka ucinge kwihlabathi lokuvuka kwindawo apho ufuna ukwenza utshintsho ebomini bakho.
Uvavanyo oludlulayo ephupheni ufuna ukwalatha ephupheni ukuba angabakho kumzabalazo wobomi kwihlabathi lokwenyani. Unazo zonke izakhono kunye neetalente zokufezekisa iinjongo ezibekiweyo.
Ngamanye amaxesha uphawu lokuphupha "ukuphela koviwo lwezifundo" lunokuvela Ukuzigxeka kwaye ubonise umnqweno wokusebenza kakuhle. Ukuphupha kuvavanywa kaninzi ebomini bokuvuka. Kungenxa yokuba injongo yakhe ihlala ikukufezekisa okona kulungileyo kunye nokuphuma kuye. Kodwa kuya kufuneka ujonge ukuba unako kwaye ufuna ukumelana noxinzelelo lwangaphakathi lwexesha elide. Ngenxa yokuba uhlala ufeza okona kulungileyo, ngamanye amaxesha iinzame ezigabadeleyo ziyimfuneko.
Uphawu lwephupha «uvavanyo lokugqibela» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha kutolika ukupasa uviwo lokugqitywa kwesikolo ephupheni njengelengqondo. Tshintsha ye-ego yomntu ophuphayo. Oku kuthetha ukuba ukwinkqubo yokutshintsha ubuntu bakho kwihlabathi elivukayo liye kolunye uhlobo lobomi.
Nangona kunjalo, ukuba awupasanga kuvavanyo lokugqibela ephupheni, oku kunokuchazwa njengophawu loloyiko lotshintsho. Ukuphupha akuziva kufana nokhu kwaye kuyazikhusela ngokuchasene nezinto ezintsha. Angathanda ukuqhubeka nenkqubo yakhe yakudala. Nangona kunjalo, ukuba uphumelele ngempumelelo uviwo lokugqibela lwesikolo sephupha, kuya kufuneka uqaphele ukuba uvulelekile kuyo yonke into. Kuba le ndlela yokuziphatha iya kukuqhubela phambili kubomi bokuvuka.
Uphawu lwephupha «uvavanyo lokugqibela» - ukutolika kokomoya
Ngaphakathi ekutolikeni amaphupha okomoya, uphawu lwephupha "ubungqina bokuvuthwa" lufuna ukubonisa iphupha apho liyakhona. Umbono wokomoya ungazisa.